उद्यमी बन्न कश्मिराबाट सिक्नु - Nepalgunj Business
उद्यमी बन्न कश्मिराबाट सिक्नु
‘ सामान्य महिलाले कसरी यति ठुलो उद्योग चलाउनु भएको छ भनेर उहाँहरुले अचम्म मान्नु भयो । तर अचम्म मान्नुपर्ने कुरै थिएन । मैले त्यो काम निरन्तर गरिरहेकी
थिए ।’कागजपत्र र फिल्डमै गएर हेरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले स्यावासी दिदै मियाँलाई नमुना महिला उद्यमी भनेर प्रोत्साहन गर्न चाहिरहेका छन् ।
नेपालगन्ज : सरल जीवनशैली अपनाएकी कालि मियाँले (कश्मिरा) लाखौंको लगानीमा गार्मेन्ट उद्योेग चलाएकी छन् भन्दा कसैले पत्याउँदैैन । त्यस्तो अनुभव स्वयं उनले बटुलेकी छन् । उद्योग मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी समेत झट्् कुरा सुन्दा कुनै बेला अचम्ममा परेका थिए रे । त्यस्तो अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्—‘ सामान्य महिलाले कसरी यति ठुलो उद्योग चलाउनु भएको छ भनेर उहाँहरुले अचम्म मान्नु भयो । तर अचम्म मान्नुपर्ने कुरै थिएन । मैले त्यो काम निरन्तर गरिरहेकी थिए ।’कागजपत्र र फिल्डमै गएर हेरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले स्यावासी दिदै मियाँलाई नमुना महिला उद्यमी भनेर प्रोत्साहन गर्न चाहिरहेका छन् ।कालि मियाँकोे उद्योगी बन्ने पाटो साच्चिकै प्रेरणादायी छ । महिला, त्यसमा पनि अझ अल्पसंख्यक समुदायकी उनले कसरी आजको अवस्थामा आफुलाई ल्याई पुर्याईन ? झट् सुन्दा त अचम्मनै लाग्न सक्छ । उनका लागि भने अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कुरै छैन रे । भन्छिन््, —‘ किन अचम्म मान्नुपर्ने ? तर मान्छन्् । सायद महिलाले केहीगर्न सक्दैनन् भनेर पनि यस्तो सोंच पलाएको होला । ’अर्खाखाँचीको मुस्लिम समुदायमा जन्मिएकी कालि मियाँको व्यवसायीक दौड कक्षा ८ पढिसकेपछि नै सुरु भएको थियो । महिलालाई घरभित्रै समेट्नपर्र्छ भन्ने समाज र घरपरिवारको सांघुरो सोंचको परिवन्दमा परेपछि उनले त्यो भन्दा धेरै पढ्न
पाईनन् । पढेर केहीबन्ने उनको सपना त्यही तुहियो । तर हिम्मतहार्ने कुरा उनको मन, मस्तिष्कमै थिएन । उनले बिकल्प खोजिन्, व्यवसाय । कसैले सुरु नगरेको कुखुरा व्यवसायमा हात हालिन् ।
मियाँले त्यो व्यवसाय सुरु गरे पछि गाउँ, बजारम उधम नै भयो । महिलाले व्यापार गरेको देखेर खिस्सी उडाउनेदेखि अपमान गर्नेहरु सम्मको कमी थिएन । घण्टौं हिडेर दाना ल्याउन जादा उस्तै मजाक गरेर उनको कुरा उडाउँथे । तर ती सबै कुरा उनले एक कानले सुन्थिन, अर्को कानले उडाउथिन् । मियाँकोे कथन छ,—‘त्यस्ता कुराले मलाई कत्तिपनि फरक पारेन् । भन्नेलाई भन्न देउ भन्दै हाँस्दै अघि बढ्थे ।’ भन्नेलाई भन्नदिने तर नआत्तिने उनको यही हिम्मतले आजको अवस्थामा ल्याई पुर््याएको छ । अर्घाखाचीबाट उनको परिवार नेपालगन्जमा झर््यो । त्यसबेला सम्म उनको बिहे भइसकेको थियो । नेपालगन्ज आएपछि नयाँ काम गर्न सुरु गरिन । उनमा सानै देखि उत्पादनमुखी व्यवसायमा संलग्न हुने सोंच थियो । पछि त्यसैमा लागिन् । नेपालगन्ज आएपछि ८ हजारको सिलाई कटाई मेशिन खरिद गरेर बिभिन्न कपडाहरु निर्र्माण गरिन । त्यो कपडा बिक्री गर्न पसल धाउने गर्थिन उनी । आफ्नो काम देखेर प्रोत्साह नगर्ने काम भएको उनले सुनाईन । त्यसबेला उनलाई सहयोग गर्नेहरुमा यहाँका व्यवसायी नन्दलाल बैश्य, दुर्गा भण्डारी, टंक धामी पहिलो नम्बरमा थिए । कपडामा सहयोग, आर्थिक सहयोग र हौसलादिन्थे उनीहरुले । उनीहरुकै प्रोत्साहनले टिकेको मियाँले स्वीकार गरिन् ।
यतिले पुग्ने कुरै थिएन, उनलाई । अझ अगाडी बढनु थियो । सानो काममा बचत पनिभएकै थियो । पैसाको जोरजाम गरेपछि उनको उद्योग क्षेत्रमा कायापलट गर्ने दिनहरु नजिकिदै गए । उनले नेपालगन्जमै लुम्बिनी गार्मेन्ट उद्योग खोलिन । ६० वटा त मेशिन नै थिए । कामगर्नेहरुको संख्या १ सय ५० बढि । लाखौंको कारोवार बन्यो । अर्घाखाँचीकी सामान्य महिला आफ्ना क्षमता, सामाथ्र्यबाट एउटा ठुलो उद्योगको मालिक बन्न सफल भईन ।
तर दुर्र्भाग्य ! जीवनभर संघर्ष गरेकीका लिमियाँलाई दैबी बिपत्तीले छोयो । गत पुस महिनामा उनको जीवनकै ठुलो बिपत्ती आईलाग्यो । दुःःखले आर्जेको उद्योग जल्यो । उद्योग पुरै ध्वस्तभयो । एक करोड७५ लाखको सामाग्री नष्ट भयो । हेर्दाहेर्दै दुःखले जोडेको यतिका ठुलो उद्योग क्षणभरमै खरानी बन्यो । धेरैले सोचेका थिए, मिया अब हार खान्छिन्् । तर अह ! उनले हार खाईनन् । भित्रीचोट आफैसंग राखिन । बल्झिन् दिइनन् ।उद्योग जले पनिउनले आफ्नो हिम्मत जल्न दिईनन् । फेरी पहिला सहयोग गर्ने व्यवसायीहरु दुर्गा भण्डारी, टंक धामीलगायतले उनलाई निकै ठुलो सहयोग गरे । आर्थिक सहायता नै गरेपछि आगोले खरानीभएको मियाको उद्योग फेरी माथि उठ्यो । उनले उद्योगलाई पहिल्येकै अवस्थामा ल्याउन काम गरिरहेकी छन् ।
‘ कुनै संकोच नमानेर कामगर्ने हो । निश्चित उदेश्य लिएर अगाडी बढे अबश्य सफल भईन्छ ।’ मियाले भनिन् –‘ भन्नेले त जे पनि भन्छन् । तर धर्म, इमान, इज्जतको ख्यालगर्दै काम गरे कसैले बोल्ने हिम्मत राख्दैनन् ।’ अहिले त उनका छोराले पनिउनलाई साथ दिइरहेका छन् । छोराको साथ पाएपछि त उनको हिम्मत झनै बढेको छ ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर १०, २०७५ 8:11:38 AM